Nezvedu - Ningbo MH
Yakatarirwa muN Ningbo, MH Indasitiri yakagadzirwa mu 1999, yakagadzirwa mune zvekugadzira zvinhu uye zvinhu zvokugadzirisa. Mushure memakore ekufambisa, MH yakagadzira ukama hwebhizimisi nenyika dzinopfuura 150, mararamiro edu "MH" anozivikanwa zvikuru mumisika yepamusha uye yepamhenderekedzo, Mh ikambani yakaonekwawo se "Top 500 China Service Industry" uye "AAA Trustworthy Company "...zvimwe
Parizvino, MH ane zvikwama zvipfumbamwe zvinopararira mumatatu matatu ekugadzira.
Kubva 1999 yekugadzirwa kwe Ningbo MH.
Unoda kuziva kambani inobatanidzwa muchirongwa chekuratidzira?
Unoda kuva mujeri wedu here? Uyai, tibatane nesu.
Makambani anotarisana nehupenyu hwemabasa.
Kuziva sangano redu uye vashandi vanorarama kuburikidza nevhidhiyo
Nezvedu musha Categories --Threads --Zizi --Ribbon & Tape --Ropa --Vanhu - Buttons --Interlining - Tassel & Fringe / Kuchengeta - Kubatsira Zvinhu --Garments & Accessories --Sewing Machine & Parts --Fabric - Vamwe Nezvedu --MH Overview --MH Industrial --- Thread Factories --- Ribbon & Tape Factories --- Laces Factories --MH History - Tara Shows --Image Galleries --Video Album Taura nesu --Inzvimbo nzvimbo --Feedback Community --Join Us